Fidinan'ny governemanta tany Isalo – Vohipeno | Primature
Mahazoarivo, ny 13 janoary 2020 – Manoloana ny fahamaizana nitranga tao amin’ny fokontany Isalo, Vohipeno, ao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany, dia nanatanteraka iraka avy amin’ny Filohan’ny Repoblika ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian, androany; delegasiona izay nahitàna ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ny minisitry ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ary ny Sekretera Jeneralin’ny Fiadidiana ny Repoblika.
Ny tanjona dia ny hanampiana ireo tra-boina sy hijerena ifotony ny zava-misy any an-toerana, hahafahana mametraka lamina maty paika hamahàna haingana ny olana.
Marihina fa tafo miisa 235 no lasibatra izay vokatry ny tsy fifehezana ny afo avy amina trano fiantsonan’ny fiara iray ka niparitaka tamin’ny tanàna. 1115 ireo tra-boina sy tsy manan-kialofana any an-toerana, saingy tsy nisy kosa ny aina nafoy.
Araka izany dia tafo miisa 1000, kojakoja fampiasa an-dakozia isan-karazany, vary 60 kitapo, ary voamaina 30 kitapo no natolotry ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny BNGRC ho an’ ireo tra-boina, entina hiatrehana ny fiarenana. Nitsidika ireo olona roa niharan-doza ihany koa ny Praiminisitra sy ny mpanara-dia azy. Efa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitalin’i Vohipeno izy ireo amin’izao fotoana izao. Nanapa-kevitra handray an-tanana manontolo ny saran’ny fitsaboana ny fitondram-panjakana. Araka ny vaovao voaray dia mila fitsaboana manokana aty an-drenivohitra ny iray amin’izy ireo ka niantohana, araka izany, ny fampiakarana azy eto Antananarivo.
Nohamafisin’ny Praiminisitra fa laharam-pahamehana ny fijerena ny fanajariana sy ny fandaminana ny tanàna ary tokony hahay haka lesona amin’ny adidy tokony notanterahina ihany koa, hoy izy, ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny mba tsy hiverimberenan’ny loza tahaka izao.
Nananaraotra nanatanteraka fivoriana arak’asa tao Manakara, niarahana tamin’ny manam-pahefana any amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany, ireo solombavambahoaka, ireo Ben’ny Tanàna vaovao lany tamin’ny fifidianana farany teo, ireo talem-paritra isan-tsokajiny amin’ny minisitera, ireo lehiben’ny sampan-draharaham-panjakana any amin’ity Faritra ity, ary ireo tompon’andraikitry ny fandriampahalemana sy ny avy amin’ny minisiteran’ny Fitsaràna, ny delegasiona notarihin’ny Praiminisitra. Fotoana izany nahafahana namariparitra ny tena olana mikasika ny fandriampahalemana, indrindra eo amin’ny sehatra fitrandrahana lavanila, ka noresahina araka izany ny hametrahana ny Dinam-paritra ao anatin’ny fotoana fohy. Nifanankalozana ihany koa ny resaka fampandrosoana ka nosinganina tamin’izany ny hahazoana atsy ho atsy, fiaran-dalamby ho an’ny fitaterana an-dalamby avy ao Fianarantsoa mankany amin’ny Faritra Atsinanana (FCE), ny fanavaozana ny lalamby mampitohy an’i Fianarantsoa sy Manakara, ny fanavaozana ny seraranan-tsambon’ny Manakara, ny fanitarana ny lakandranon’i Pangalana hatrany Manakara, ny hambolena zanakazo miisa 3 tapitrisa amin’ity taona ity, ny famerenana ny tanim-panjakana, ary ny fanavaozana ny hopitaly manara-penitra ao Manakara. Manoloana ny faharavàna vokatry ny loza niseho tao amin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany dia tapaka fa hisy ny famolavolàna paikadim-paritra mifanaraka amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary.
Nankasitrahan’ireo tompon’andraikitra rehetra ny fidinana ifotony tahaka izao satria manome ainga vao sy fientanana eo amin’ny andraikitra sy adidy horaisina hampandrosoana ny any amin’ny Faritra.
← Andron’ny Manamboninahitra 2020